Galmeelee HTML alaa galchuuf qindaa'inoota qindeessa.
Lakkoofsotaaf gitoo biyyaa 'English (USA)' fayyadami
Yoo mallattaa'uu baate, lakkoofsonni akka qindaa'inoota Tools - Options - Language Settings - Language of - Locale setting keessatti hiikama. Yoo mallattaa'e, lakkoofsonni akka gitoo biyyaa 'English (USA)' tti hiikama.
Iyyaatoota HTML hin beekamne akka badheeleetti alaa galchi
Qindaa'inoota bocquu dhiisi
Dirqaala kana barreeffama bu'uuraa LibreOffice osoo hin uumin dura kakaasuu qabda, kana malee waan saagamuu baatufi.Barreeffamoonni bu'uuraa LibreOffice mata duree galmee HTML keessatti argamuu qabu.
Of eeggannoo agarsiisi
Caalalaan HTMl CSS2Cascading Style Sheets Level 2) galmeelee maxxansuuf ni deeggara. Dandeettiin kunneen kan bu'aa qabeessa ta'an yoo ala baasti teessuma maxxansaa kaka'e qofaa dha.
Title is: Walsimannaa HTML